Agaasime diiday inuu u hogaansamo shaqo joojin uu kusameeyey wasiir Yariisow
Home /Blog/Agaasime diiday inuu u hogaansamo shaqo joojin uu kusameeyey wasiir Yariisow
Agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdrisaaq Cali Yuusuf Bahlaawi ayaa ka horyimid inuu u hogaansamo shaqo joojin laba cisho kahor uu sameeyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariisow.
Wasiirka ayaa horay shaqo joojin ugu sameeyey agaasimeyaal uu ku jiro Bahlaawi kadib markii uu sheegay inay galeen dambiyo musuqmaasuq iyo maamul xummo.
Cabdirisaaq Cali Yuusuf Bah-laawi ayaa kahor yimid inuu xafiiska baneeyo , arintaasi oo sababtay in lagu guul daraysto wadahalo beesha uu kasoo jeeday iyo garyaqaan guud ay ku doonayeen inuu u hogaansamo amarka wasiirka.
Wasiir Yariisow ayaa soo saaray qoraal uu ku amrayo ciidamada nabad galyada ee xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya inay ka hor istagaan inuu yimaado xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho.
Keating Condemns increased Attacks Against Civilians
Wadooyinka magaalada Muqdisho oo xiran